1. Pipi yakaisvonaka Rich kuravira Nezvinhu zvakasiyana Asi kana zvabatanidzwa pamwe chete, isu tiri kutaura nezve fudge. Menyu iyo vanhu vazhinji vanogona kufunga kuti yakaoma. Uye haudi kutora njodzi Asi funga nezvazvo, iri nyore-kugadzira menyu. Kwete kuda uye kuomarara Iyo dhizeti iyo vana vachafanirwa kudya nekudya zvakare zvisina kufinha. Mushure meizvozvo, ngatifare pamwe chete. Pamwe chete nenzira yekugadzira fudge iyo chero munhu anogona kuita. Nemusanganiswa wechokoreti nemukaka Inogona kunzi iko kugadzirwa kweiyo dhizeti, kuoneka kweiyo fudge magadzirirwo Izvi zvinokupa iwe yakapfava uye inotsvedzerera kuravira, yakavanzwa neinonaka chokoreti kuravira uye chaiyo fudge, hapana yakaoma nzira uye zvigadzirwa. Iyo dhizeti iyo vana vanofarira uye vanonyanya kuda. Mushure meizvozvo, ngatigadzirire izvo zvinoshandiswa. Zvakareruka zvinongedzo nemidziyo, asi kuravira kunoshamisa.
2. Fudge nderupi rudzi rwe dessert chaiyo? 1 inogona yemukaka wakanyoroveswa (14 oz)
3. 3 makapu eMukaka Chokoreti Chips
4. Tsvina nemafuta emiriwo kana bota
5. Ndiro dzekugadzira
6. Chokoreti tireyi
7. Freud bepa
8. Maitiro ekugadzira fudge, zvinonaka, zvinonamira dhizeti Inoiswa mu microwave pane kupisa kukuru Zvinotora mamineti 1. • Cheka bepa reFreud pachitray chakagadzirwa. Wobva wamwaya mafuta emuriwo kana kuzora ruomba rusingasviki. Zvekuti chokoreti hainamatire kune rusununguko kuti zvive nyore kubvisa.
9. • Wobva wadira chokoreti mugango rakagadzirwa kana muforoma. Shandisa ladle kupukuta kumeso kumeso. Wobva waisa musanganiswa mufiriji kwemaawa angangoita maviri kusvikira zvanyatsooma.
10. • Kana firiji kwemaawa maviri, bvisa kubva muforoma. Wobva waburitswa, wacheka kuita mativi mabara, kana kucheka kuita zvidimbu zvekuruma kana uchishandirwa neshuga yechando. Kana imwe shuga shoma Kugadzira iyo inotapira kuravira, isa iyo pamusoro peiyo fudge. Izvo chete zvinonaka.Fudge chidya chinogona kugadzirirwa pati pamberi. Nekuti inogona kuchengetwa mufiriji Kunyanya yemafaro ane vana kana sedhiri rinotapira mushure mekudya kwemanheru. Izvo zvinotorwa kuti zvive nyore kushandira uye kuravira kwakapfava Kana kushandira vaenzi panguva yekofi uye tii zvikamu, zvinoenderana neanenge ese marudzi ezvinwiwa zvinopisa Uye zvakare, kugona kuzviita iwe pachako kunogona zvakare kuwedzera zvinonaka uye mabhenefiti kubva kuzere zviyo, nzungu kana michero yakaomeswa. Iite iyo yakasarudzika fudge kubva kune zvakapoterera zvinhu, saka ngatiitei fudge mufiriji yevaenzi kana mapato !!